PU Leather ပါ။
ကား Foot Mat
Leather ကား Foot Mat
2022 တရုတ်နှစ်သစ်ကူး အားလပ်ရက် အသိပေးချက်
ချစ်လှစွာသောမိတ်ဆွေများ Bensen Leather သည် 2022 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 29 ရက်မှ 2022 ခုနှစ်အထိ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ အားလပ်ရက်အတွင်းတွင် သင်သည် အခမဲ့ အော်ဒါမှာယူနိုင်ပါသည်။မှာယူမှုများအားလုံးကို 2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ 8 ရက်နေ့တွင် စီမံဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Synthetic Leather - သင်သိလိုသမျှ
စတိုးဆိုင်များတွင် သင်မြင်ဖူးသည်၊ ၎င်းကို အွန်လိုင်းတွင် မြင်ဖူးသည်- "ပေါင်းစပ်သားရေဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်"၊ နှင့် ပစ္စည်းသည် မည်မျှကောင်းသည် နှင့် ခံစားချက်ကို တွေးတော၍မရပါ။ဒါပေမယ့် ပေါင်းစပ်သားရေဆိုတာ တကယ်တော့ ဘာလဲ၊ ဘာကြောင့် အရာရာတိုင်းနဲ့ ဒီလောက် အဆင်ပြေရတာလဲ။၁၉ ရာစုကတည်းက ကမ္ဘာကြီးဟာ...
Synthetic သားရေကို အသုံးပြု၍ ကားများအတွက် ဂရုစိုက်ပါ။
မော်တော်ကားများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝတွင် အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်လာသည်နှင့်အမျှ ကားပိုင်ရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ကားများအတွက် သားရေအတုကို ပို၍ပို၍ တောင်းဆိုလာကြသည်။ယနေ့ Bensen သည် ဓာတုသားရေကို အသုံးပြုနည်းနှင့် ၎င်းကို ထိန်းသိမ်းရန် လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်များကို ရှင်းပြထားသည်။Synthetic သားရေအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ မှတ်ချက်များ- Synthetic...
ခရစ္စမတ် ခရစ်စမတ်၏ မူလအစသည် ခရစ်ယာန်များအတွက် အရေးကြီးသော အားလပ်ရက်ဖြစ်ပြီး သခင်ယေရှု၏ ဖွားမြင်ခြင်းကို သတိရစေသည်။သမ္မာကျမ်းစာအရ ယေရှုသည် ယုဒပြည်ရှိ မြို့ငယ်လေး ဗက်လင်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။အပျိုစင်မာရီအား ပဋိသန္ဓေယူရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့ပြီး သူမ၏မွေးရပ်မြေသို့ ပြန်လာသောအခါတွင် ...
ကားအတွင်းခန်း Leather သည် အဘယ်ကြောင့် Fogging ဖြစ်စဉ်များ ပေါ်လာမည်နည်း။
FOGGING အတုသားရေစစ်ဆေးမှုသည် အဓိကအားဖြင့် ဖန် သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်သတ္တုပြားပေါ်တွင် ပေါင်းစပ်ထားသော မတည်ငြိမ်သော အရာများအတွက် အဓိကအားဖြင့် စမ်းသပ်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။အလင်းပို့လွှတ်ခြင်းနည်းလမ်း သို့မဟုတ် အလေးချိန်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ အလေးချိန်နည်းလမ်းသည် လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် 2mg အတွင်းတွင် စံနှုန်းပြည့်မီစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။Th...
Artificial Synthetic Leather က ဘာကြောင့် ကမ္ဘာကို သိမ်းပိုက်တာလဲ။
သဘာဝသားရေအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ ယခုအခါ ထုတ်လုပ်သူအများအပြားသည် အတုပြုလုပ်ထားသော သားရေကို အသုံးပြုလိုကြသည်။အမှန်မှာ၊ 2022 ခုနှစ်တွင်၊ ပေါင်းစပ်သားရေထည်စျေးကွက်သည်ဒေါ်လာ 136.7 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်ထားသည်။ဘယ်ကလာတာလဲ။အနုပညာလိုအပ်ချက်...
ပေါင်းစပ်သားရေဖြင့် ရေအခြေခံ polyurethane အစေး တိုးလာလျှင် RMB 2000-3000 တန်၊
မကြာသေးမီအချိန်အတွင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်နှင့် ဓာတုဗေဒ သွင်းအားစုဖောင်းပွမှုတို့ကြောင့် ပြည်နယ်တစ်ခုစီ၏ “နှစ်ဆထိန်းချုပ်မှုမူဝါဒ” အသစ်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှုတို့ကြောင့် ကုန်ကြမ်းစျေးနှုန်းများ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ဖိအားများ လျော့ပါးစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်...
ကျေးဇူးတော်နေ့သည် မိသားစု အားလပ်ရက်၊ မိသားစုများ အတူတကွ ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲရသော အချိန်၊ မိသားစု ပြန်လည် ဆုံဆည်းရန် အချိန်၊ မိတ်သဟာရ ဖွဲ့ရသော အချိန်၊ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း၏ ရွှင်လန်းမှုကို ဝေမျှရန် အချိန်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အတွက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရန် အချိန်၊ ကျေးဇူးတော်နေ့ဆိုတာ ဒါပဲလေ။သမိုင်း...
Zhengzhou Convention and Exhibition Center International Auto Show ပြီးဆုံးသောအခါတွင် ကားပိုင်ရှင်များသည် အသစ်စက်စက် ကားအသစ်စက်စက်ကို နှစ်သက်ရုံမျှမက ပိုများလာကာ ကားအတွင်းပိုင်းကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်၍ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် သားရေကုန်ကြမ်းများကို အသုံးပြုကာ၊ PU မိုက်ခရိုဖ...
2021 ခုနှစ် 14 ကြိမ်မြောက် Zhengzhou နိုင်ငံတကာ မော်တော်ကားပြပွဲ
အော်တိုပြသမှုအမည် ： 2021 ခုနှစ် 14 ကြိမ်မြောက် Zhengzhou နိုင်ငံတကာ မော်တော်ကားပြပွဲ Car Show Type ： ပြီးပြည့်စုံသော ကားပြပွဲ အော်တိုပြသချိန် ： နိုဝင်ဘာလ ။04၊ 2021 – နိုဝင်ဘာ 08၊ 2021 တွင် အော်တိုပြရန် တည်နေရာ- Zhengzhou International Convention and Exhibition Center Auto Show မိတ်ဆက်- 14th Zhengzhou International Autom...
2021 ခုနှစ် တရုတ် သားရေ ပြပွဲ အားလုံးကို ရှန်ဟိုင်းတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
2021 All China Leather Exhibition Fair ကို နိုဝင်ဘာလ 23 ရက်နေ့မှ 25 ရက်နေ့အထိ ရွှေ့ဆိုင်းရန် All China Leather Exhibition (ACLE) စီစဉ်သူများ China Leather Association (CLIA) နှင့် Asia Pacific Leather Fair Limited (APLF) မှ မူလစီစဉ်ထားသည့် China Leather Exhibition Fair အားလုံးကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
PVC Leather နှင့် PU Leather ၏ လျှောက်လွှာ အပိုင်းအခြား
PVC သားရေ၏အမည်အပြည့်အစုံမှာ polyvinyl chloride သားရေဖြစ်သည်။PVC သည် ဓာတ်တိုးမှု၊ ပြင်းထန်သော အက်ဆစ်များနှင့် လျှော့ချမှုကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသော ပုံဆောင်ခဲမဟုတ်သော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။PVC သားရေသည် မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှုနှင့် အထူးကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး မီးလောင်လွယ်၍ ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
လိပ်စာ- Shangwu Neihuan လမ်း၊ CBD ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၊ Zhengzhou၊ Henan၊ တရုတ်။
ဖုန်း : +86-13381860818
ကားအတွင်းခန်းပစ္စည်းများနှင့် အရောင်အသွေးဆိုင်ရာ မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်နှင့် သင့်အတွက် လုပ်ဆောင်နေသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
မိုက်ခရိုဖိုက်ဘာ သားရေ ရှေ့ကားဖျာ ငါ့အနီးရှိ ကားထိုင်ခုံကူရှင် Leather ကားထိုင်ခုံအခြေအနေ ကားကြမ်းခင်းဖျာ 4d ကားဖျာ